Mkpọmpe: New Trends Na SEO Marketing
Ivan Konovalov, Semalt Ọkachamara, na-ekwu na imejuputa iwu AI na-eme ka enwere ike inweta asọmpi asọmpi, nke a nwere ike ịbụ n'ihi nyocha dị elu, ikuku ọbara na mpaghara. Ma, ka anyị na-amata banyere uru nke AI, ịmebata ya na azụmahịa ahịa azụ nwere ike ịghọ ezigbo ihe ịma aka. Na nke a, Kevin Bobowski, SVP na marketer nke SEO na-enye uru zuru ezu nke AI na-ere ahịa. Ọ na-akọwa na ọtụtụ ndị ọrụ, pasent ha ruru pasent 60, malite nyocha ha na ngwaọrụ mkpanaka. Ọ na-akọwa na ọ dịghị ndị ahịa ahịa dijitalụ ndị na-adịghị arụsi ọrụ ike na-ebugharị nyocha na fon ha ma ọ bụ na-achọ ụlọ ọrụ ọchụchọ na-achọpụta ọrụ kacha mma.
N'agbanyeghi na e ji igwe eji eme ihe n'igwe ahia, ndi oru nyocha, o bu ihe nwute, leghaara ojiji nke AI na nyocha anya. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị ahịa na-eche ọtụtụ ihe ịma aka na-arụ ọrụ ha, yana ịbawanye asọmpi n'ọhịa - teleprompter glasses. Ozi ọma ahụ bụ na e nwere ụzọ dị mfe iji nyere aka dozie esemokwu a. Nke mbụ, ị ga-aghọta onye ahịa ahụ bu n'uche, yana mkpa ha n'oge oge kpọmkwem site na iji ụlọ ọrụ search engine arụ ọrụ kachasị mma.
Site na ụzọ, Kevin Bobowski kwenyere na iji nyochagharị olu na-eme ka ọtụtụ mgbanwe dị n'ahịa ahịa dịka ọ ga - enwe ike inyere ndị na - ere ahịa aka na engines ọchụchọ ka ha ghọtakwuo mmasị ndị ahịa dị iche iche nwere. Ọzọkwa, a ga-enwe mgbanwe na ụzọ ndị ahịa na-etinye. Dị ka ọmụmaatụ, kama ide "Ụlọ New York", ha ga-ajụ "Ebee ka m nwere ike ịchọta echiche kacha mma na New York?". Nke a bụ nnukwu ohere na ohere nye ndị ahịa nke nwere ike ịmeziwanye ahịa ha ma wetara ha nnukwu ego kwa afọ.
Otú ọ dị, ajụjụ a ka nọgidere na-ekwu bụ "Gịnị bụ mmetụta nke a na omume SEO?" N'inwe ajụjụ a n'uche, a ga-eme ka ihe ndị ọzọ na-elekwasị anya gaa na ndị ọzọ ederede ogologo-tail, nke a ga-emekwa ka usoro ahụ dị mfe ma dị ngwa iji buli elu. Ndị mmadu ejirila na-ekwurịta okwu na ngwá ọrụ dị ka Alexa na Siri. Rịba ama na mmekọrịta a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe nile na-ewe ụdị ụdị ajụjụ. Na omume, ọ pụtara na ị nwere ike melite saịtị gị site na ịtinye peeji nke FAQ ma ọ bụ ịmepụta blog na-enye azịza nye ajụjụ ndị kachasị ewu ewu.